China Mugadziri Yakachena Yakachena Nitrogen Equipment PSA Nitrogen jenareta vagadziri uye vanotengesa | KANA
Mugadziri Yakakwira Yakachena Nitrogen Equipment PSA Nitrogen jenareta
Psa nitrogen jenareta, PSA Oxygen purifier, PSA nitrogen purifier, hydrogen jenareta, VPSA okisijeni jenareta, VSA okisijeni jenareta, Membrane okisijeni jenareta, Membrane senitrogen jenareta, Liquid (cryogenic) okisijeni, nitrogen uye argon jenareta, nezvimwewo, uye anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri epetroleum, oiri & gasi, makemikari, zvemagetsi, simbi, marasha, mishonga, muchadenga, mota, girazi, mapurasitiki, chikafu, kurapwa, zviyo, kuchera, kucheka, kutungidza, zvinhu zvitsva, nezvimwe. uye yakapfuma mhinduro mhinduro mumaindasitiri akasiyana siyana, matanda ekupa vatengi vedu ine yakavimbika, yakawanda mari, iri nyore nyanzvi gasi mhinduro.
Iyo senitrogen jenareta inovakwa zvinoenderana nesisitimu yekushanda PSA (Pressure Swing Adsorption) uye inoumbwa neinopfuurisa maviri macomputer akazadzwa nemaseru sieve.Maforamu aya akayambuka neimwe nzira nemhepo yakamanikidzwa (yaimbocheneswa kuitira kubvisa mafuta, humidity uye hupfu) uye gadzira nitrogen. Nepo mudziyo, wakayambuka nemhepo yakamanikidzwa, uchigadzira gasi, imwe yacho inozvigadzirisazve pachayo ichirasikirwa nekumanikidza mweya iwo magasi akamboshambadzirwa. Maitiro acho anodzokororwa nenzira yakatenderera. Iwo majenareta anotarisirwa nePLC.
PSA Nitrogen jenareta chinhu senitrogen chizvarwa michina inotora kabhoni mamoresi nesefa se adsorbent - yakamanikidzwa kushambadzira uye desorption yemweya kubva mumhepo, zvichikonzera kupatsanurwa kwenitrogen.
Carbon molecular sieve's O2 uye N2 adsorption zvivakwa pamwe nekuwedzera kwekushambadzira kumanikidza kunoita O2, N2 kushambadzira kugona kunowedzera, uye iyo adsorption mwero weO2 wakakwira. PSA nitrogen majenareta anonyatsoshandisa zvinhu izvi zve nitrogen, oxygen uye CMS. Asi izvi hazvina kukwana, zvinhu zvakawanda zvinozotarisirwa uye kushandisirwa kune akanakisa - ndosaka PSA nitrogen majenareta achigamuchirwa uye achizivikanwa kwazvo pasirese nekuti ita zvese zvakanakisa. PSA kutenderera ipfupi - O2, N2 kushambadzira kunotanga kubva ku equilibrium / kumanikidza kuenzana, asi iyo O2, N2 diffusion / desorption rate yakatosiyana zvekuti O2 adsorption kugona munguva pfupi yakanyanya kukwirira kupfuura iyo adsorption kugona kweN2. PSA Nitrogen chizvarwa tekinoroji irikushandisa kabhoni mamoresi nesefa yekushambadzira hunhu, uye musimboti wekumanikidza kushambadzira, desorption decompression kutenderera - iyo yakamanikidzwa mweya neimwe nzira inoenda mukati maviri kushambadzira shongwe kuti uwane kupatsanurwa kwemhepo, nokudaro uchigadzira kuenderera kuyerera kwechigadzirwa senitrogen. Nekudaro kuziva izvi hakuna kukwana - yakanga yagadzira zvese izvi kune akanakisa mune ese PSA nitrogen majenareta.
Pashure: Onsite nitrogen kurongedza muchina wekudya indasitiri Chikafu Giredhi Nitrogen jenareta
Zvadaro: Wepamusoro mhando PSA okisijeni chirimwa chiri kutengeswa kupisa kumaodzanyemba kweAmerica kumabvazuva kweAsiai nehunhu hwakavimbiswa nezve kugona kwakanyanya
Yakakwira Yakachena Nitrogen Inogadzira Sisitimu
Yakakwira Yakachena Nitrogen jenareta
Wepamusoro Yemhando Yakakwira Inoshanda Liquid
Zvigadzirwa Zvakanakira 1: Yakazara otomatiki Rotary Mhepo Compressor. 2: Yakadzika kwazvo simba rekushandisa. 3: Kuchengetedza kwemvura semhepo compressor mweya wakatonhora. 4: 100% isina simbi yekuvaka ikholamu maererano neASME zviyero. 5: Yakachena yakachena Oxygen yekurapa / chipatara kushandiswa. 6: Skid yakasimudzwa vhezheni (Hapana hwaro hunodiwa) 7: Kurumidza kutanga uye Kudzima tim ...
Chigadzirwa Zvakanakira Tinotora nzira dzakasiyana dzekurongedza zvinoenderana nezvinodiwa. Akaputirwa mabhegi uye mabhokisi emapuranga anowanzo shandiswa kusaisa mvura, guruva-chiratidzo uye kushamisika-chiratidzo zvinangwa, kuve nechokwadi chekuti yega michina inoramba iri mumamiriro akakwana mushure mekusununguka. Panyaya yekushomeka, kambani ine hombe warehous ...